Lavaka afo avo lenta
Anaran'ny vokatra Fitaovana hazavana avo lenta vy vy karbonina, vy tsy misy fangarony, vy vy famaritana arakaraka ny fisoratan'ny mpanjifa Lokon'ny harafesina, loko voajanahary na loko avo lenta OEM Manaiky vokatra natokana ho an'ny famokarana fanodinana stamping, fihodinana na fisarahana fantsom-panafarana ampiharina ampiasaina amin'ny fanafanana, famonoana na haingo Quality Standard ISO 9001: 2008 Quality system Certification Warranty Periode 1 taona Package Kitay hazo, ...
manorina faritra dia workpiece na banga azo amin'ny forging sy deforming ny vy banga. Ny toetra mekanika ny vy billet dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanerena mba hahatonga azy io hamokatra déformation plastika.
Lohataona avo lenta
Spring dia ampahany mekanika mampiasa elastika hiasa .Ny ampahany vita amin'ny fitaovana elastika dia simba eo ambanin'ny fihetsiky ny hery ivelany, ary miverina amin'ny toetrany voalohany taorian'ny nanesorana ireo hery avy any ivelany.
Loha hemispherical avo lenta
Loha hemispherical dia milaza ny loha izay misy antsasaky ny boribory boribory sy ny sisiny mahitsy (varingarina fohy amin'ny varingarina) .Ny tadin'ny fihodinan'ny vatan'ny boribory dia mitovy na aiza na aiza, ary ny hery dia mitovy.
Loha mavo avo lenta
Loha maty dia manondro ny loha izay misy akorandriaka boribory, sisiny boribory ary sisiny manify (fitsaboana vetivety). Noho ny fiovana tampoka eo amin'ny fitaratry ny fihodinan'ny akoraka boribory sy ny flange, ny flange ary ny sisiny mahitsy an'ny fifandraisana ,
Loha manara-penitra avo lenta
Loha elips enti-milaza loha iray misy akorandriaka elliptika antsasaky sy sisiny mahitsy (vitrana varingarina) satria miova tsy miova ny famolavolana ny curve elliptika